Umboniso we-Gangster uJohn 'Dapper Don' Gotti
Umntu owayengumhlengikazi weNtsapho yaseGambino enamandla
Oku kulandelayo kwiprofayili kaJohn Gotti, owayengumnye we-godfather weentsapho ezinamandla zaseGambino.
Wazalelwa: Oktobha 27, 1940, eBronx, eNew York
Xa wayeneminyaka eli-12 ubudala, intsapho yakhe yafudukela kwingxenyana eqatha eBrooklyn, eNew York.
UGotti waphuma esikolweni kwibanga lesibhozo waza waqalisa ukubandakanyeka kwexesha elizeleyo kwimigundane yezitalato kunye nobugebengu obuncinane.
Kwiminyaka eyi-20 ubudala, wadibanisa neNtsapho yaseGambino waza waba kufuphi no-Underboss Aniello Dellacroce. Ubungcali beGotti ngelo xesha babelahla iilori zorhwebo eKhennedy Airport.
Ngo-Matshi 6, 1962, uGotti washada noVictoria DiGiorgio, owayenabantwana abahlanu: u-Angela (owazalwa ngo-1961), uVictoria, uJohn, uFrank noPeter.
Ngo-1969, wagwetywa iminyaka emithathu ejele ngenxa yokuphanga.
Ngowe-1973, wathatha inxaxheba ekubulaweni kukaJames McBratney. UMcBratney wayengomnye wabathumba abathathu nababulali bakaManny Gambino, umntakwabo uCarlo Gambino.
UJohn Gotti unecala lokubulala waza wagwetywa iminyaka eyisixhenxe entolongweni, amabini awayekhonza phambi kokuba akhululwe.
Emva kokuvalelwa entolongweni, uGotti washukunyiswa ngokukhawuleza, kwiindawo zakhe zokubulala uMcBratney. Ngelo xesha, ukufa kukaCarlo Gambino wamisela uPawulos Castellano njengomceli wakhe.
Ngoku i-capo, ukuthembeka kukaGootti wabeka kunye nomcebisi wakhe, uNeil Dellacroce, kwaye kwaziwa kakuhle ukuba uGotti wayeziva uGambino kufuneka amisele iDellacroce njengomceli wakhe kwaye kungekhona u-Castellano.
Ekubeni ngo-1978, uGotti wabizwa ngokuba yi-capo waza waqhubeka esebenza phezulu kwiDellacroce.
Intlekele yedwa yahlasela indlu yakwaGoti. UJohn Favara, umhlobo nommelwane, wagijima waza wabulala unyana kaGotti oneminyaka eli-12 ubudala, uFrank. Esi siganeko sabonwa ngengozi. Kwiinyanga ezine emva koko, uFavara wanyamalala, akaze aphinde abuywe.
NgoFebruwari 1985, uCompellano kunye nabaqashi beeNtsapho zintlanu bebekwe icala kwiKomishoni. I-Castellano nayo ibhekene neendaba zokuthi indlu yakhe yayingcingo kunye neengxoxo zavezwa kwaye oko kwabangela ukuba abanye abasebenzi baseGotti bahlwaywe ngokurhweba nge-narcotic.
Ngethuba elifanayo, uCompellano wanika uThomas Bilotti isikhundla se-capo, esambeka kunye noGotti kwinqanaba elinye. Kuthe kwathiwa xa uDellacroce efile, uBylotti wayeza kuthiwa ngu-Underboss, ambeke esikhundleni se-Fatherfather kwisiganeko uCastellano waya entolongweni.
Ejongene nethemba lokuphila entolongweni, abaninzi abanenkxalabo yeCastellano bangayijika ingubo.
NgoDisemba 1985, iDellacroce yafa ngumhlaza. Kwiiveki ezimbini kamva uCastellano noBylotti badutshulwa babulawa eManhattan.
UGotti Uba nguTebe we-Gambino Family
Ngo-Castellano, Bilotti kunye noDellacroce bonke beye, uGotti uthathe ulawulo lweyona nkulu inkulu yaseMafia kulolu hlanga, wamisa ikomkhulu lakhe kwiRavenite Social Club.
Ngomnyaka we-1986, uGotti wahlawuliswa ngokunyaniseka kodwa wakwazi ukungafuni ukutshutshiswa.
Kwiminyaka embalwa ezayo, uGotti waba ngumgca weendaba. Wayefakela kwiimpahla zakhe ezixabisekileyo kunye neengubo zeendaba, abahlala bekhona bekulungele ukuthatha isithombe sakhe.
Umshicileli wambiza ngokuthi nguDapper Don ngenxa yekhwele lakhe elibukhali kunye nobukeka obuhle, kunye noTeflon Don ngenxa yokuba amatyala awayebhekisele kuye awazange abonakale enamathela.
UGotti wayefuna ukuba i-Capos yentsapho kunye namajoni eze kwiRavenite ukubonisa inhlonipho yakhe. Oku kwaphazamisa abaninzi babo ngokubhengeza kumabonakude, into eyayibuya emva kwexesha ukuba ihlasele abanye babo.
Ukuhlaselwa kweGotti Kuqala
Emva kokuthenga i-Ravenite Social Club, ekugqibeleni i-FBI yakwazi ukufumana i-RICO (i-Racketeer-Influenced Organisation Corrupt Organisation Act ka-1970) ityala kuye ngenxa yeeyure ezingama-100 zeetape ezithintela yena kunye nabanye ngokucwangcisa amacebo.
I-Underboss, uSammy "uBull" uGravano, emva kokuva uGotti esithi izinto ezihlambalazayo ngaye, waguquka ingubo kwaye wabambisana kunye noorhulumente ukuba angqinisise ngokumelene neGotti.
UGravano wavuma ukuya ku-19 wabulala kodwa wafumana isigxina esipheleleyo sobungqina bakhe ngokumelene noJohn Gotti. Igama lakhe lomnxeba uSammy "i-Bull" latshintshela ku-Sammy "i-Rat". UGravano wanikwa isigwebo seminyaka emihlanu kwaye wangena kwiNkqubo yoKhuselo yamaNgqina.
UGotti kunye nabahlobo abambalwa baboshwa ngo-1990. UGotti wagwetywa yigqwetha eNkundla yeSithili yase-United States ngo-Ephreli 2, 1992, malunga nama-14 amacala okubulala, inceba yokubulala, ukutsalwa kwemali mboleko, ukunyaniseka, ukuphazamiseka komthetho, ukungcakaza ngokungekho mthethweni, kunye nokukhutshwa kweerhafu. UJohan Gotti Jr. wayephethe umphathi weGotti ngelixa wayesetolongweni.
Ixesha lakhe entolongweni kwakungekho lula. Wathunyelwa kwigodala elidlulileyo elisentolongweni eMarion, eItaly, apho wayegcinwe khona-ntolongweni yedwa elingu-23 iiyure ngosuku ngeminyaka elithoba.
NgoJuni 10, 2002, emva kokumelana nomhlaza iminyaka emininzi, uJohn Gotti wasweleka kwi-United States yeZonyango kwiZiko leeNtsholongwane e-Federalfield, eMissouri.
Umngcwabo omkhulu wawugcinwe kwiSixeko saseNew York, apho amalungu amaninzi eNkcubeko yoLwaphulo-mthetho lweGambino beza kuhlawula imbeko yabo yokugqibela kumholi wabo owayo.
Kuthiwa uYohn Gotti, uJr. Ngoku uyintloko yeNtsapho yoLwaphulo-mthetho lweGambino.
MD5 Ukuhlaselwa eDelphi
Ukuthengiswa koRhulumente weLizwe loLuntu
Ukuchonga izihlahla ze-spruce
Ukuqonda uMhlaba oMgangatho